Home News Gudoomiyaha Degmada Balcad oo dadka deegaanka geed faqay u awood-sheeganaya iyo Cabasho...
Gudoomiyaha Degmada Balcad oo dadka deegaanka geed faqay u awood-sheeganaya iyo Cabasho xoogan oo kasoo yeereeysa
Ciidamo uu watay gudoomiyaha Degmada Balcad Ee Gobolka Shabeellaha dhexe Qaasim Furdug ayaa weerar ku qaaday deegaanada Xaanshooleey iyo Geed faqay ee hoostaga degmdaasi balcad,waxaana halkaasi ka dhashay qasaaro kala duwan oo soo gaaray dadka shacabka ah.
Sida ay inoo sheegeen dadka deegaan weerarka lagu qaaday deegaanadaani ayaa yimid ka dib markii Gudoomiyaha degmada balcad uu deegaankaasi oo ah dhul beeraleey iyo xoolaleeyba leh in ka qaato dhul iyo xoolo taasna ay diideen dadka deegaanka.
Intaasi ka dib ayuu amray ciidamo xoogan in ay gaaraan deegaanadaasi si ay bulshadaasi xoog ugu maquuniyaan,balse dadka deegaanka ayaa ka hor yimid.
Mid ka mid ah Dadka deegaanka oo la hadlay mid ka mid ah Warbaahinta Muqdisho ayaa waxaa uu sheegay in Gudoomiye qaasim uu weerarkaasi si bareer ah usoo qaaday islamarkaana uu dilay caruur aad u yar yar.
Dowlada federaalka ah ee Soomaaliya iyo Maamulka Hirshabeelle ayuu ugu baaqay in ay arintaani soo farageliyaan islamarkaana ay wax ka qabtaan duulaanka qayaxan ee gudoomiye qaasim,odayaasha deegaanada geed faqay iyo xaanshooleey oo u tegay gudoomiyaha ayuu u sheegay in tiisa loo fuliyo hadii kale uu baabi’in doono labadaasi deegaan.
Waxaa kale oo uu ruuxaani warbaahinta u sheegay in aysan helin deegaanadaasi adeegyo caafimaad,amni iyo waxbarasho taasi oo looga baahnaa Maamulka Degmada Balcad balse taas bedelkeedii waxaa ay ugu dhigeen in dhiigooda la qubo.
Umadda Soomaaliyeed aadbeey ugu raageen falal ku saleeysan xoogga,waxaana ceeb ah in Maamulka degmo uu xoog u adeegsado bulsho aan hubeeysniin
Previous articleTaliska ciidamada Mareykanka ee AFRICOM oo sheegay inuu kordhin doono duqeymaha uu ka geysto Soomaaliya
Next articleMadaxweyne Uhuru Kenyatta oo shaaciyay war aysan u riyaaqin inta badan Soomaalida
Maxaa kasoo baxay kulan aan caadi aheeyn o ay yeesheen Golaha...